Yocingo: Izindaba, imisebenzi kanye nezinzuzo kuze kube yinguqulo yamanje | Kusuka kuLinux
I-Telegram 1.6: Yini okusha kuhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo
I-WhatsApp ivame ukubhekwa njengohlelo lokusebenza lwemiyalezo olwaziwa kakhulu, olusakazekile nolusetshenzisiwe, futhi kungenzeka, kepha lokho akusho ukuthi ukude kakhulu emakethe noma okusebenzayo kakhulu noma okusebenzayo kwayo yonke imvelo yezinhlelo zokusebenza ezikhona zemiyalezo. Futhi iTelegram iyindlela enhle kakhulu yamapulatifomu amaningi ongayisebenzisa njengomphelelisi nokufaka esikhundleni seWhatsApp.
Kodwa-ke, abathandi bezinye izindlela, amathuba, i-counter-current, banakho Ezinye izinhlelo zokusebenza ezinjenge: ChatON, Facebook Messenger, Hangouts, KakaoTalk, Kik Messenger, Line, LiveProfile, Skype, Snapchat, Tango, Telegram, Viber, WeChat, Wire, phakathi kwabanye abaningi. Esimweni sethu, sizogxila kuTelegram, uhlelo lokusebenza noma insizakalo yemiyalezo eyenziwe nguPável Dúrov.
2.1 Iyini i-Telegram?
2.3.2 Okuqukethwe kanye Nemilayezo
2.3.3 Oxhumana nabo nama-Akhawunti
2.3.4 Ingxoxo, iziteshi, amaqembu namaqembu amakhulu
I-Telegram, isanda kugxumela phambili futhi ngokufaka abasebenzisi abasha ababhalisiwe abayizigidi ezintathu, phakathi kwengozi enkulu yakamuva ye-Facebook, Instagram ne-WhatsApp. Okungukuthi, futhi sicaphuna amagama omdali wayo, owaziwa nangokuthi yi- «Russian Zuckerberg»:
Kuhle lokho. Sinezimfihlo zangempela nesikhala esingenamkhawulo sawo wonke umuntu.
Futhi kithina, ku-DesdeLinux Blog, akusikho okokuqala ukuthi sikhulume, sincome futhi sifundise ukuthi lisetshenziswe kanjani leli thuluzi. Njengoba sinezincwadi ezinhle zangaphambilini ngakho, njenge: Ungayifaka kanjani iTelegram kuLinux? nguDavid Naranjo no Amathiphu wokufaka i-Popcorn Time, Spotify neTelegram ku-DEBIAN kokubhala kwami.
Ngakho-ke kulolu shicilelo ngeke sigxile kwezobuchwepheshe obujulile, kepha ekusebenzeni okusebenzayo ngempela, okungukuthi, izindaba, imisebenzi, kanye nezinzuzo ezivelele kakhulu kuze kufike kunguqulo yamanje.
Okwalabo abangaqapheli ngokuphelele ngalolu hlelo lokusebenza nensizakalo yemiyalezo, singakwenza kucace futhi ngqo, sicaphuna i- iwebhusayithi esemthethweni, okuyi:
Uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ligxile kusivinini nokuphepha, kushesha kakhulu, kulula futhi kumahhala. Ungasebenzisa iTelegram kuwo wonke amadivayisi wakho ngasikhathi sinye. Imiyalezo yakho ivumelaniswe ngokukhululekile kunoma iyiphi ifoni yakho, amaphilisi noma i-PC.
Nge-Telegram, ungathumela imilayezo, izithombe, amavidiyo namafayela wanoma yiluphi uhlobo (i-doc, i-zip, i-mp3, njll.), Kanye nokwakha amaqembu afinyelela kubantu abangama-200 noma iziteshi zokusakaza kuzithameli ezingenamkhawulo. Ungabhalela oxhumana nabo befoni bese uthola abantu ngezivumelwano zabo. Ngenxa yalokhu, iTelegram ifana ne-SMS ne-imeyili kuhlanganisiwe, futhi ingahlangabezana nazo zonke izidingo zakho zemiyalezo yomuntu siqu noma yebhizinisi. Ngokwengeziwe, iTelegram inikeza izingcingo zezwi ngokubethela kokuphela kokuphela.
Futhi nganoma ikuphi ukunwetshwa okujwayelekile kulesi sicelo esishiwo, kuhle ukuxhumana ngqo ne isigaba semibuzo ngeSpanishi, okungeyakho kuwebhusayithi yakho. Yize kufanelekile ukusho ukuthi ekuqaleni, iTelegram yayiwuhlelo lokusebenza lweselula oluncane futhi olulula futhi kancane kancane isizibonakalise njengenye indlela eqinile futhi eqinile yamapulatifomu amaningi, okungukuthi, ayasebenziseka kuma-Operating Systems amakhulu (i-Android, iOS, MacOS, Windows, GNU / Linux) neziphequluli zeWebhu (i-Chrome, Firefox, i-Opera, phakathi kwabanye).
Idalwe ngo-2013, iTelegram njengamanje ngefomethi yedeskithophu yayo ye-GNU / Linux isenguqulweni engu-1.6.2 futhi kwiselula ye-Android iku-5.5.0. Isebenzisa ubuchwepheshe be-MTProto kwingqalasizinda yayo futhi ibandakanya, phakathi kwemisebenzi ejwayelekile futhi eyisisekelo yanoma iluphi uhlobo lwayo, izici ezihlukile kanye / noma ezintsha njengokusebenzisa izitika (ama-decals) nama-bots (amarobhothi azenzekelayo nawenziwe ngezifiso), kanye nenani elikhulayo lezinsizakalo lokho kukhulisa futhi kuqinise ikhwalithi yesipiliyoni somsebenzisi kuso.
Njengamanje iTelegram ngezindlela zayo ezahlukahlukene zepulatifomu ngayinye (Ideskithophu, Iselula, iWebhu) ifaka noma ifaka izici ezintsha ezilandelayo:
Shaya izingcingo zevidiyo
Isikrini sokuphatha iqembu esisha nesithuthukisiwe: Okuthi, phakathi kwezinye izinto, manje kukuvumela ukuthi usebenzise ukusesha kuzilungiselelo ukuthola izinketho neziphakamiso ezivela emibuzweni ebuzwa njalo.
Ukuphathwa okungcono kwe-Emojis: Uma kukhulunywa ngamandla, funa ama-emoji, ama-GIF, nezitika kuphaneli ehlelwe kabusha. Thola iziphakamiso ze-emoji egameni lokuqala olithayipha emlayezo. Buka ama-emoji amakhulu emilayezweni equkethe ama-emoji kuphela futhi useshe isitikha usebenzisa amagama (ngokususelwa ku-emoji efanelekile).
Ukuphathwa kwemiyalezo enwetshiwe: Manje ukusebenza kokususa imiyalezo kunwetshiwe, kufinyelela ekususweni kwanoma yimuphi umlayezo wabo bobabili abasebenzisi kunoma iyiphi ingxoxo eyimfihlo, lapho kudingeka. Futhi lawula ukuthi imilayezo yethu izoxhunyaniswa ne-akhawunti yethu lapho idluliswa.
Ukudlala ividiyo okuzenzakalelayo: Ikuvumela ukuthi udlale amavidiyo ngaphandle kokuwalanda futhi udlale amancane ngaphandle komsindo lapho ekhonjiswa esikrinini, kunenketho yokusebenzisa umsindo, ngokumane ucindezele izinkinobho zevolumu zedivayisi. Ama-GIF nemiyalezo yevidiyo kungabukwa ngaphandle kokulinda ukuthi balande ngokuphelele.
Ukulandwa okuzenzakalelayo: Ikuvumela ukuthi ulungiselele mathupha ukulandwa okuzenzakalelayo ngohlobo lwengxoxo, uhlobo lwemidiya, nosayizi wefayela. Ukukhumbula izinketho ezisethwe njengokusetha ngokwezifiso uma kwenzeka udinga ukushintshela phansi okuphambene nalokho, noma okuphambene nalokho.
Ukuxhaswa kwama-akhawunti amaningi: Faka ukusekelwa kokuhlalisana kwezinombolo zocingo eziningana nama-akhawunti amaningi weTelegram kuhlelo lokusebenza olulodwa (Ideskithophu, Iselula, iWebhu), futhi ngaleyo ndlela kube lula ukuphathwa kwama-akhawunti amaningi naphakathi
Ukuphathwa kweseshini yomsebenzisi esebenzayo: Kusiza umkhuba wokungena ngemvume, kungadingeki futhi kube wusizo ngaphezu kweTelegram, ngokwenza imenyu yokuphuma ngemvume manje ibonise izinketho eziningi ezihlukile zokuvala iseshini esebenzayo.
Isithombe sephrofayili: Manje iTelegram ivumela umsebenzisi ngamunye ukuthi abe nezithombe zephrofayili ezi-2. Eyodwa yoxhumana nabo ababhalisiwe nenye ehlukile yabantu bonke. Okubandakanya ukungezwa okungeziwe kunketho ejwayelekile yokufihla isithombe sephrofayela esingasithola kwezinye izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo. Kusivumela nokuthi silawule ukuthi ngubani ongabona isithombe sethu sephrofayili.
Ukudlulisa umlayezo: Inika amandla umsebenzi wokudlulisa umyalezo ovela kumuntu onqatshelwe ukwenza njalo. Ukwenza ikhophi yayo kuthunyelwe, ngaphandle kokufaka ithuba lokuthola iphrofayili yombhali nokuthola ubuqiniso bayo. Ngaphezu kwalokho, i-ID yomsebenzisi emyalezweni odlulisiwe ingasebenza, njengoba kungumyalezo odlulisiwe.
Okunye okubalulekile: Zungezisa isikrini ukuze ushintshele kumodi yesikrini esigcwele lapho ubuka ividiyo ezenzakalela ngomsindo. Finyelela ingxenye ngayinye yohlelo lokusebenza usebenzisa i-TalkBack. Nokuthuthuka kwekhwalithi yamakholi enziwe.
Njengamanje iTelegram ngezindlela zayo ezahlukahlukene zepulatifomu ngayinye (Ideskithophu, Iselula, iWebhu) inemisebenzi elandelayo (izici):
Shaya izingcingo, thumela amanothi wezwi nemiyalezo yevidiyo.
Faka uhlelo lokusebenza ngekhodi ye-PIN noma ngeminwe.
Lungiselela ukukhiya okuzenzakalelayo isikhathi esithile.
Cubungula ukusekelwa okuzenzakalelayo ngobuchwepheshe be-IFTTT.
Phequlula i-Inthanethi ngaphandle kokushiya uhlelo lokusebenza, ngenxa yesiphequluli sakho sewebhu sangaphakathi.
Thola izaziso zohlelo lokusebenza ngekhono lokuzenza ngezifiso koxhumana naye ngamunye obhalisiwe.
Izinketho zokuphepha zokuphatha: Ubani ongabona ukuxhumana kwethu kokugcina? futhi Ngubani ongangeza eqenjini? ukuvimba abasebenzisi nokwenza ngezifiso lezo zinketho.
Ukusetshenziswa kwethuluzi leTelegraph, ukudala ama-athikili (imiyalezo emide / emide) ukwenza lula ukuthumela kwabo nokubuka kwabo (Ukubuka Okusheshayo) ngengxoxo noma ngesiteshi.
Thumela indawo yethu ngesikhathi sangempela, ukuze abanye abantu bazi indawo yethu enembile ngesikhathi esichaziwe X.
Ukuvumelanisa okuqhubekayo kokuqukethwe efwini (i-Intanethi) ukuze kufinyeleleke kalula futhi ngokushesha kuwo kusuka kumadivayisi ahlukene asetshenzisiwe.
Hlela ukuthi yiluphi uhlobo lwamafayela oluzolandwa ngokuzenzakalela kuye ngohlobo lwesiteshi sokuxhumeka kwe-Inthanethi (iWired, Mobile noma iWi-Fi), ukusiza ukusebenzisa imali encane nokulawula okungcono kwalokho okusetshenzisiwe.
Sesha imilayezo ngosuku, kusuka engxoxweni ethile, ngokucindezela amasethingi / usesho / ikhalenda. Ithuluzi elihle kakhulu lokusesha imininingwane yakudala.
Izinhlelo zokusebenza ezingekho emthethweni ezifaka uchungechunge lwemisebenzi engadlisi, kepha ezithuthukisa umuzwa womsebenzisi omnandi okhona kuhlelo lokusebenza olusemthethweni.
Ukusetshenziswa kwama-bots (amarobhothi azenzakalelayo futhi enziwa ngezifiso) alungiselelwe ukwenza noma yimuphi umsebenzi. Kubandakanya ukuba khona kwenani elikhulu lemidlalo emincane, eminye yayo enekhwalithi enhle kakhulu, ngenxa yesikhulumi esihle kakhulu se-bot, ikakhulukazi ama- @ gamebot ne- @ gamee bots.
I-Telegram ayinayo futhi kungenzeka kakhulu ukuthi ayisoze yaba nokukhangisa, kuyilapho i-WhatsApp ingayifaka nganoma yisiphi isikhathi ngoba isicelo sohwebo futhi manje esiphethwe yinkampani ye-Facebook.
Ivumela ukulungiswa okuzenzakalelayo ukusebenzisa (ukulanda) idatha encane yabasebenzisi abahlala emazweni anezindleko eziphezulu zedatha. Ukungeza amandla wokubuka nokushintsha phakathi kwamanani wokuzenzakalelayo aphansi, aphakathi nendawo naphezulu ngokuya ngemodi yokulanda eyenziwe yasebenza (Iselula, Iyazula ne-Wi-Fi)
Okuqukethwe kanye Nemilayezo
Hlela uphinde ususe imilayezo esivele ithunyelwe.
Yenza usesho lomhlaba wonke kokuqukethwe.
Gcina okuqukethwe kwezingxoxo, kufaka phakathi umlando.
Phatha izithombe zokugqwayiza, umsindo, isithombe, umbhalo kanye nevidiyo, kuze kufike ku-1.5 GB, konke kusuka kusixhumi esibonakalayo esilula futhi esisebenzisanayo.
Gcina imilayezo esalungiswa, ilusizo ukuqala umyalezo, ngokwesibonelo, kwiselula, bese uyiqedela kukhompyutha noma kwenye iselula kamuva, bese uyithumela.
Inketho yemiyalezo egciniwe, ekuvumela ukuthi uxoxe nawe, futhi ngaleyo ndlela uthumele ngokuzenzakalela zonke izinhlobo zamafayela ngokushesha futhi uvumelanise phakathi kwawo wonke amadivayisi.
Oxhumana nabo nama-Akhawunti
Sebenzisa incwadi yamaselula ukuthola amalungu eTelegram.
Hlela ukubhujiswa okuzenzakalelayo noma ukuvimba i-akhawunti yeTelegram ngemuva kwesikhathi sokungasebenzi, okungaba kusuka enyangeni kuye onyakeni.
Sebenzisa i-alias ngaphandle kweGama, bese usebenzisa okufanayo ukuthola abanye futhi ukwazi ukukhuluma nabo ngqo. Lokhu kugwema ukunikeza inombolo yethu yocingo ukuze basishayele kamuva ngaphandle kokufisa ukwenza kanjalo.
Hlanganisa i-albhamu yezithombe nesithombe sephrofayili ye-akhawunti ngayinye bese ubona izithombe zangaphambilini ezazisunguliwe.
Sebenzisa ama-akhawunti amaningi (kufika ezinombolweni ezi-3) bese ushintsha kalula phakathi kwawo ngaphandle kokungena ngemvume. Ngaphezu kokuthola izaziso zohlelo lokusebenza lwawo wonke ama-akhawunti amisiwe ngolwazi olumayelana ne-akhawunti ethunyelwe kuyo. Futhi thola ukubuka kohlu lwengxoxo ye-akhawunti ngokuthepha nokuyibamba esigabeni sezilungiselelo.
Ingxoxo, iziteshi, amaqembu namaqembu amakhulu
Sebenzisa iziteshi zokusakaza, amaqembu namaqembu amakhulu. Lokhu kungaba esidlangalaleni noma okuyimfihlo, futhi kokugcina kutholakala kuphela ngesixhumanisi sesimemo (i-URL), esenziwe ngokwezifiso, uma iqembu lisesidlangalaleni.
Yazi amaqembu afanayo nomunye umsebenzisi futhi useshe amaqembu esigabeni sokusesha.
Lungisa (ihange) imiyalezo ezihlokweni zeziteshi zakho noma ezilawulwayo namaqembu. Kubandakanya ukukwazi ukumisa endaweni yokuqala yohlu lwengxoxo engxoxweni ethile.
Dala izingxoxo eziyimfihlo nethuba lokuthumela imilayezo ngesikhathi sokuzibhubhisa, futhi uthumele izithombe, ama-gif noma izitika ezinosuku lokuphelelwa isikhathi.
Shintsha isithombe sangemuva se-Chat bese usebenzisa izingqikithi eziphelele zohlelo lokusebenza. Kubandakanya amandla okuzakhela awethu, uma kwenzeka singathandi noma yiluphi uhlu olubanzi lwezindikimba ezitholakalayo.
Bhala imilayezo ngokugqamile noma ngomalukeke umane ubeke ngaphambi nangemva kwegama ngalinye / ibinzana i-asterisk ephindwe kabili (**) ngokugqamile, i-hyphen (__) yama-ithalikhi namamaki wokucaphuna kathathu («`) we-monospace.
Enza ngendlela oyifisayo usayizi wombhalo, kusuka kusayizi 12 kuye kusayizi 30, kulabo abakhetha imibhalo enezinhlamvu ezinosayizi abahlukahlukene.
Shintsha usayizi wezithombe usayizi othize nefomethi ethile.
Faka noma udale ama-decals (izitika), owakho noma abanye.
Bukela amavidiyo e-YouTube emawindini antantayo, ngenxa yesithombe esikumodi yesithombe.
Sebenzisa iTelegram njengesidlali se-multimedia (I-Audio / Ividiyo), ikuvumela ukuthi udlale amafayela amaningi ngasikhathi sinye ku-loop noma ngendlela engahleliwe.
Thumela amaqembu ezithombe bese ukhetha ukuhleleka kokuzithumela, uchofoze kuzo ukuphatha izinombolo ezibonisa ukulethwa kokulethwa.
Dala ama-Gif kusuka kumavidiyo athunyelwe, uthumele ividiyo bese uyayithulisa, bese uyigcina njengefayela le-Gif. Futhi ubasheke engxoxweni ngokucindezela uphawu lwekholoni (:) ngaphambi kwegama elihambisanayo.
Sebenzisa isihleli sesithombe esivumela phakathi kwezinto eziningi ukuguqula ukugqama, umbala, umehluko, ukufiphala bese ufaka ama-vignette. Ngaphezu kokungeza izinto ezifana nezibuko, izigqoko, amawigi nazo zonke izinhlobo zokungezwa ezithombeni ezenziwe ngobuso bethu ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokubona ubuso.
Kafushane nje singasho ukuthi uhlelo lokusebenza:
Ukuthi uhlala ehamba phambili ezinguquko, emisebenzini nasezilungisweni ezidingekayo futhi ecelwa ngumphakathi. Ikakhulu ezingeni lobumfihlo nezici zokuphepha.
Ivela eRussia hhayi eNyakatho Melika, okusho ukuthi ibhonasi yokuphepha eyengeziwe, mayelana nezibopho kule ndaba ebekwe nguhulumeni waseNyakatho Melika ezingeni lomhlaba jikelele.
Isebenzisa izinsizakusebenza ezincane, ibhethri elingaphansi, imemori engaphansi yenqama yamakhompyutha namadivayisi lapho efakwe khona noma esebenza khona.
I-API kabani nenqubo yayo yokuxhumana "mahhala" (Umthombo Ovulekile) futhi kumahhala.
Yocingo, selokhu yasungulwa, inezinketho eziningi, ukuthuthuka kanye namathuluzi kune-WhatsApp. Futhi njengamanje yize kungesilo uhlelo oluholayo oluzenzakalelayo emakethe, kumadivayisi, noma ngabasebenzisi, ukusetshenziswa kwalo, ukwamukelwa nokuqashelwa ngumphakathi womhlaba kukhula njalo nsuku zonke, ikakhulukazi ngemigomo eyisisekelo njengokutholakala. , isimanjemanje, ukuqamba izinto ezintsha, ezokuphepha nobumfihlo.
Nokho, manje njengoba wazi okuningi ngeTelegram, sikumema ukuthi ujoyine, uyifake, uyihlole futhi uyithuthukise phakathi koxhumana nabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Yocingo: Izindaba, imisebenzi kanye nezinzuzo kuze kufike kunguqulo yamanje
Yini engingayengeza kule ndatshana enhle? Ukuthi wonke umuntu ofuna noma onelukuluku lokwazi ukuthi yini iTelegram, KUFANELE ayifunde.
Njengenjwayelo, ngiyabonga kakhulu ngamazwana akho amahle, futhi siyajabula kakhulu ngokuthi ukuthandile. Ngiyethemba ukuthi izosebenzela abantu abaningi ngokwengeziwe ngayo futhi bathuthele phambili kuyo ngokuqhubekayo kungekudala.
uhlelo oluhle kakhulu, kepha…. Angivumelani nephuzu 2 lezinzuzo, akuphephile nakancane, impela ngoba amaRussia angabaphangi abaningi noma ngaphezulu kunamaYankees, ngakho-ke, uma ukhuluma ngezokuphepha, bengingeke ngibeke izandla zami kulokho iphuzu.
Ngiyakuqonda futhi ngiyalihlonipha lelo phuzu ... Ngingangeza kuphela ngivuna lokho engikuphikisayo, ukuthi ngokwazi kwami, umdali nokusetshenziswa kwayo, yize bengamaRussia, iziphathimandla ezifanayo zaseRussia zilwe nayo ngoba azizange zivume obala ezimfuno ezifanayo, ukuze bakwazi ukufinyelela emilayezweni yabasebenzisi ngendlela esemthethweni, okungacabangi noma okuthembekile ngakolunye uhlangothi nganoma yisiphi isicelo semiyalezo, ngoba njengoba sonke sicabanga, ngokusemthethweni noma cha, bayakwazi ukufinyelela noma babengeke babavumele basebenze, njengoba basebenza ngaphandle kwezinkinga noma izimfuno namuhla. Ngakho-ke uma sibheka ukuthi iTelegram ayikunikezanga ngokusemthethweni ukuphepha nobumfihlo kuhulumeni waseRussia, okungenani inzuzo yokungabaza inayo, akunjalo?
Indatshana enhle kakhulu. Kimi iTelegram yilona hlelo lokusebenza olungcono kakhulu lokuthumela imiyalezo njengamanje.
Nakimi, uma ngifuna ukwenza ihaba ngokuphepha nokuphepha ngingasebenzisa isiginali.
Angazi isignali. Ngizoyihlola.
URafa Vidal kusho
Senginesikhathi eside ngineTelegram, kodwa iqiniso ukuthi, angiyisebenzisi. Ngolunye usuku ngangena futhi ngabona ukuthi nginoxhumana naye kuTelegram engingamazi ukuthi ungubani, akekho encwadini yami yocingo, futhi angazi ukuthi ungubani, Bonke oxhumana nabo babhalwe ngamagama amnyama futhi lokhu ngezinhlamvu eziluhlaza, futhi angazi ukuthi ungubani.kwaye ngafika kanjani lapho. Ngabe othile angangitshela ukuthi ifakwe kanjani koxhumana nabo beTelegram? Ngiyabonga.
Phendula uRafa Vidal
Sawubona Rafa! Angiqiniseki, mhlawumbe yikho kanye lokho, ukuthi ngumsebenzisi ongaziwa, ngakho-ke, awunakho enkombeni yakho futhi kubonakala kuluhlaza. Futhi nokuthi ukungeze ngegama lakho lomsebenzisi, hhayi ngenombolo yakho yocingo. Noma yimiphi imibuzo, lesi sixhumanisi yindawo ekahle yokuqala: https://telegram.org/faq/es